Fivondronamben'ny Federasiona Ranomasimbe Indiana - ss 2t l1113 lah
Tenin'ny fiainana mampahery
Alahady 09 Jona
Vakio ny Zakaria 1. Inona no hafatra lehibe ampitaina eto? Diniho manokana ny Zakaria 1:3. Inona no ambaran’ Andriamanitra amin’ny vahoaka?
Nampitsiry fifaliana tao am-pon’ireo vahoaka sisa ny fiverenenana avy tamin’ny fahababoana tany Babilônina. Kanefa niteraka fanahiana sy nahavelon-tebiteby azy ireo ihany koa io fiverenana io. Ho voaaro sy tsy hotandindomin-doza ve izy ireo eo amin’ny taniny, sa mbola ho avy handrahona azy ihany ireo fahavalony? Tena efa namela tanteraka ny tsy fahatokiany tamin’ny lasa ve Andriamanitra sa mbola hanohy hanafay azy ireo ihany? Inona no fonosin’ny hoavy ho an’ny vahoaka voafidin’Andriamanitra sy ho an’ireo firenena maro?
Hitan’i Zakaria tao amin’ny fahitana nomena azy ilay anjelin’i Jehôvah manao fifonana ho an’ny Joda. Fanontaniana no nanombohany ny teniny manao hoe: “Mandra-pahoviana?” Ampiasaina matetika io teny io ao amin’ny Baiboly hanehoana ny fahorian’ny olona sy ny fiantsoana an’i Jehôvah hamonjy (Sal. 74:10; Isa. 6:11; Dan. 8:13). Tonga avy hatrany ny valiny tamin’ny alalan’ilay anjely mpanome fanazavana, izay nampita ny hafatra tamin’ity mpaminany. Ahitana ireo teny fikasana mampanantena ny hatsaram-panahin’Andriamanitra sy ny fampiononany izany.
Nasaina nambaran’i Zakaria fa tena saro-piaro amin’i Jerosalema ny Andriamanitr’izy ireo (Zak. 1:14). Mety misy heviny ratsy ny fahasarotam-piaro, nefa ao amin’ny Baiboly dia fomba iray enti-manambara ny fitiavan’Andriamanitra ihany koa izany. Tia ny olony Andriamanitra ary nanantena azy ireo ho mahatoky. Mifanohitra amin’izany fitiavany an’i Jerosalema izany, dia lazain’ilay anjely fa tezitra amin’ireo firenena izay nampijaly ny olony i Jehôvah. Izao ny fiampangana ireo firenena ireo: lasa lavitra loatra ny fampijalian’izy ireo ireo babo, satria nampiany loza mihoatra ny famaizana avy amin’Andriamanitra izany.
Ny Zakaria 1:14 dia mahatsapa fa tezitra tokoa Andriamanitra, saingy nampanantena Izy fa hanonitra izany amin’ny fampiononana. Ny fikasany, izay nasaina nambaran’ny mpaminany Zakaria, dia ny hiverina any Jerosalema miaraka amin’ny fangoraham-po. Hampionona an’i Ziona i Jehôvah (jereo ny Isa. 40:1), ary hiantefa amin’ny fahavalony kosa ny fahatezerany. Havaozina indray i Jerosalema, ka ho toerana honenan’Andriamanitra indray izy.
Jereo indray ao amin’ny Zakaria 1:3. Amin’ny fomba ahoana no “iverenana” amin’Andriamanitra? Amin’ny lafiny inona sy inona avy no maha-antso ho amin’ny fanavaozana ny fifandraisan’ Andriamanitra manokana amin’ny olony an’io? Moa ve mba miverina amin’Andriamanitra isan’andro isika? Amin’ny fomba ahoana no hiverenantsika Aminy isan’andro?